Tricks Simple kusuka Semalt Okuzokwenza Yakho WordPress Site Njengoba Secure Njengoba kungenzeka
I-Inthanethi inikeza amathuba amaningi abantu abasebenzisa i-multipleamawebhusayithi e-commerce ukuze enze izinyathelo zabo. Ngokwesibonelo, iningi lamabhizinisi lithatha indlela ye-e-commerce, ehambisana nabaningiukuphakama nokuncipha. Isibonelo, amasayithi alawulwa abaduni. Abahlaseli bahlaselela ukuphepha kwe-cyber ngezindlela eziningi, ezenzaukuze bathole ukungena okungagunyaziwe ezitolo ezihlukahlukene ze-e-commerce kanye nokuhamba nedatha yekhasimende efanele. Ukuze uhlale uphephile kusukalezi zingongelo zomshuwalense, udinga ukuqonda ukuthi zisebenza kanjani.
I-WordPress yisistimu yokuphatha okuqukethwe ejwayelekile kakhulu. Ngokwesibonelo, WordPressunomnikazi we-webhusayithi engama-24% kuwo wonke amawebhusayithi. Bakhona lokhu ngenxa yezizathu eziningi, ezibonakala zithanda imodeli yebhizinisi labo.I-WordPress inamathuluzi amaningi nama-plugin anika amandla abasebenzisi ukuzenzekelayo amasu amaningi we-SEO nama-intanethi wokumaketha. Nokho, abantu abaningisebenzisa i-WordPress ngezidingo zabo zewebhu, abaduni kanye nezinye izinsongo ze-cyber ukuthola i-WordPress ngegolide legolide. I-WordPress yaziwa futhi iyashesha, yiyiphiyenza i-Hacking noma amanye ama-plugin ayo alula. I-hacker ingafinyelela ulwazi oluningi kusuka kunoma iyiphi indawo ngaphandle kwemvume yomnikazi.
u-Oliver King, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, uvula amathiphu alandelayo ukuthuthukisa ukuphepha kwe-WordPress lapho wenza isayithi:
Ukusebenzisa isithwebuli esiphephile se-virus kungenza ikhompiyutha yakho ikhululeke ezinambuzweni eziningi namagciwane..Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi isofthiwe emshinini wakho yizinhlelo ezifanele futhi uqinisekise ukuthi benza umsebenzi wabo wangempela. Ngiyacelasusa ngokushesha noma yiluphi uhlelo olungalungile okungaziwa ngalo. Izinyathelo ezifanayo zisebenza neziphequluli nazo. Ungavumeli noma yikuphii-plugin ukugijima kusiphequluli sakho. Zingaqukatha izikripthi, ezenza ushintsho oluhle kumakhompyutha wakho.
Gwema ugaxekile nobugebengu bokuphanga
Ungachofoli noma yikuphi ukuxhumanisa ku-imeyili yogaxekile. Lezi zixhumanisi zenza esinye sesiphambano esivamileukuhlaselwa kwesayithi. Kungase futhi kube nezinamathiselo, ezi-Trojans. Indlela evamile yokukhwela abathengisi ngokuvamile ukuthumela uhlu kuidokhumenti yegama, ene-Trojans. Njengoba umthengi ojabule evula ifayela ukuze abuke okuqukethwe kwalo, ivula igciwane lokutheleleka lonkeikhompyutha. Abantu abaningi balahlekelwa ulwazi olubalulekile ngale ndlela. Amaphasiwedi aphikisiwe angenza futhi ukuthengiselana okuningi okunjalonjengokwemali.
Uma sakha amawebhusayithi amaningi, isipiliyoni somsebenzisi, kanye nomgomo wokuphela, ngokuvamileisisusa sethu. Abathuthukisi abaningi bewebhu bagxila ku-SEO nokwenza ikhasimende lihambe ngenqubo yokuthenga kalula. Nokho, asihlulekiengqondweni ye-hacker. Ngenxa yalokho, kunezibalo ezingaphezu kuka-90987 zokuhlaselwa ezenzekayo yonke iminithi ngaphezu kwezizinda ze-WordPress. Kubalulekile ukubafunda le nqubo kanye nokwenza amawebhusayithi ethu aphephe futhi ahlasele ubufakazi. Ungenza isayithi lakho livikeleke ngama-hack elula e-WordPressnjenge-spoofing yephasiwedi kanye nezinye izinyathelo zokuphazamisa usebenzisa le mhlahlandlela. Ukuphepha kwewebhusayithi yakho kanye nokwamakhasimende akho kungasalaisheke. Ngaphezu kwalokho, iwebhusayithi ephephile yenza kahle kuma-SERP okwenza i-SEO yakho nemizamo yokuthengisa ithwale izithelo.